UDrone ubonakalisa inkqubela phambili yangoku yeCampus 2 ka-Apple | IPhone iindaba
Ividiyo entsha yokujonga idrone ibonisa inkqubela phambili yangoku yeApple Campus 2
Ekupheleni konyaka we-2013, iApple yaqala ukwakha ikomkhulu layo elitsha kunye nezicwangciso zokufudukela apho ngasekupheleni kuka-2016 Ikhampasi 2 Yakhelwe kwindawo emalunga ne-853.000m² kwaye iza kuhlala abantu abangama-12.000 kwiziko lophando kunye nophuhliso (i-R & D), iziko lokuqina komzimba kunye nokupaka, phakathi kwezinye izinto. Inkampani yaseCupertino ibonelela ngevidiyo yenyanga nenyanga apho sinokubona khona ubume beprojekthi.
Sele ipapashiwe Idrone jonga ividiyo yenyanga kaMatshi kwaye kuyo siyabona ukuba inkqubela phambili sele ihambile kangakanani, kunye nokujonga kufutshane kwayo yonke into abayenzayo. Ukunyaniseka, sithathela ingqalelo ukuba simalunga neenyanga ezili-10 ubuninzi ukusukela ngexa apho iApple ifuna ukufudukela kwiCampus 2, kubonakala kum ngathi kuya kufuneka bakhawuleze, nangona sinokucinga ukuba, njengesiqhelo, UTim Cook kunye neqela lakhe baqala ukusebenzisa i-HQ entsha ngelixa kusadinga ukugqitywa.
Ukuhlaziywa kobume benkampu ngoMatshi 2
Ulwakhiwo olutsha, olubekwe kumhlaba obukade ungowakwa Hawlett-Packard kwaye uhlawule inkampani yaseCupertino malunga ne-160 yezigidi zeedola, iya kujikelezwa ngamapaneli eglasi egobile. Xa yonke into igqityiwe, kuqikelelwa ukuba ixabiso elipheleleyo leprojekthi liya kubangela ukuba iApple ichithe phantse 500 iidola ezigidiYintoni enokubonakala njengexabiso eliphezulu, kodwa ndicinga ukuba ngeApple yi "peccata minuta."
Kwividiyo erekhodwe yidrone kulo Matshi sinokubona iinxalenye zesakhiwo, ezinje ngejimu okanye iholo elinabantu abangama-1.000 2 apho sinokubona umboniso wesixhobo sexesha elizayo. Usemninzi umsebenzi ekufuneka wenziwe, kodwa benza inkqubela phambili entle. Ukuba yonke into ihamba njengoko i-Apple ikulindele, ngokuqinisekileyo ngoDisemba siza kubona ividiyo yemeko yokugqibela yeCampus XNUMX.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Ividiyo entsha yokujonga idrone ibonisa inkqubela phambili yangoku yeApple Campus 2
luhlu oluhlu sitsho
molo ndiyifumene le vidiyo kwi-youtube malunga ne-bug ese-siri evumela ukuvula i-iPhone kunye negama lokugqitha.
Ndine-iPhone 6 kwaye iyasebenza.
Banokuxela le bug kwaye ukuba ikhona indlela yokuyilungisa.
Molweni crislellistian. Kwividiyo efanayo bathi ayisasebenzi. Ndizamile nje kwaye andinakuya kwi-iTunes ndithenga iithowuni. Ukuba ukhathazekile ngolu hlobo lwento kwaye une-iPhone 6 (engenakuyisebenzisa iHi Siri inqanyuliwe) ngekhe ndibenayo iSiri esebenzayo okanye iziko lolawulo kwiscreen sokutshixa.
Kuthekani ngokusilela kukhuseleko lwevidiyo engeyonyani, ibonakalisiwe kwaye yathethwa ziiblogi ezininzi ezinje ngeapile.
Umbuzo omnye ngokubhekisele kwinqaku, bendicinga ukuba iividiyo zenziwe ngoonontlalontle, andicingi ukuba iApple iyenzile, nangona ndicinga ukuba iApple ipapasha iingxelo rhoqo ngenyanga, kodwa andicingi ukuba ividiyo ngumsebenzi wayo, kuba ukuba khange ayenze, uya kuyilayisha kwisiteshi.iapile esemthethweni evela kuYouTube.
Kuya kuba mnandi ukubona indlela ezinyuka ngayo iinyanga ezimbalwa ezizayo, ngokungummangaliso ukuba lukhulu kangakanani ulwakhiwo nabo bonke abasebenzi abajongeka belungelelene, oko kukuthi iSpain, akunakwenzeka ukuyibona haha, kwaye iprojekthi enjalo ingathatha iminyaka eli-10 apha .
Iindleko zeCampus 2 ka-Apple aziyi kuba zizigidi ezingama-500 zeerandi, kodwa zizigidi ezingama-6000.
I-Apple ayichithi xesha kwaye iphehlelela i-beta yesithandathu ye-iOS 9.3
I-Podcast 7x01: I-Apple Campus yokuGunda ingca